Yohane Adiyisɛm 14 NA-TWI - Dwom foforo - Afei mehwɛe na mihui sɛ - Bible Gateway
Yohane Adiyisɛm 13Yohane Adiyisɛm 15
Yohane Adiyisɛm 14 Nkwa Asem (NA-TWI)
14 Afei mehwɛe na mihui sɛ Oguammaa no gyina Sion Bepɔw so. Na nnipa ɔpeha aduanan anan ka ne ho a wɔakyerɛw ne din ne n’agya din wɔ wɔn moma so. 2 Na metee nne bi fi soro a na ɛworo so te sɛ nsuworoee a ano yɛ den, na ɛte sɛ aprannaa. Ɛnne a metee no te sɛ dwom a sankubɔfo bi rebɔ wɔ ne sanku so. 3 Na nnipa ɔpeha aduanan anan no ani kyerɛ ahengua no ne ateasefo baanan no ne mpanyimfo no. Wɔtoo dwom foforo bi a gye wɔn a wɔagye wɔn a wɔafi asase so no nko ara na wotumi suae. 4 Wɔyɛ mmarima bi a esiane sɛ wɔne mmea nna no nti, wɔn ho atew. Baabiara a Oguammaa no bɛkɔ no, na wodi n’akyi. Wɔagye wɔn nkwa afi nnipa mu, na wɔne nnipa a wodi kan a wɔde wɔn ama Onyankopɔn ne Oguammaa no. 5 Wɔnka atorosɛm, na mfomso nni wɔn ho.